Tallaabo ay qaadey Kenya oo ka farxiysay reer Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Tallaabo ay qaadey Kenya oo ka farxiysay reer Muqdisho
Mudo hal bil ah ayuu hakad ku jiray duulimaadka labada dal, taasoo saameyn weyn ku yeelatay ganacsiga.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ganacsatada ku sugan Muqdisho, gaar ahaan dadka ka shaqeeya Travel Agency ayaa aad usoo dhaweeyay dib u furida duulimaadka tooska ee Nairobi iyo Muqdisho.
Duulimaadka ayaa Maanta billowday, waxaana la filayaa inay dad badan oo safar wareeg ah u mari jiray Nairobi ay ka raysan doonaan, waxaana sidoo kale dhanka ganacsiga ka dhigaysaa mid xoogeysta.
Qiimo aad u sareeya oo gaaraya $600 oo dollar ayuu gaarey Tikidka, oo markii hore ahaa $220, iyadoo qofka ku qaadanaysay 8 saacadood inuu ku tago Kenya, maadaama laga soo wareegayay Itoobiya.
Kenya ayaa si lama filaan ah u xirtay hawada Soomaaliya, iyadoo dib uga laabatay go'aankaas 10-kii bishan, kadib markii wadahadallo u furmeen labada dowladood, iyadoo lagu wado in Safaaradaha labada dhinac dib u furaan.
Kenya ayaa ku cadaadinaysa dowladda Soomaaliya inay dib u furto duulimaadyadii Qaadka oo tan iyo 2020 kadib markii Covid-19 ka dilaacay wadanka, iyado markii dambe uu xaaladda Farmaajo siyaasadeeyay.